“Musuqii Ugu Xuma Somaliland Wuxuu Ka Dhacay Somaliland 7dii Sanno Ee Siilaanyo Xilka Hayay W/Q Mohamed Abdi Hassan Diridhaba | Berberatoday.com
“Musuqii Ugu Xuma Somaliland Wuxuu Ka Dhacay Somaliland 7dii Sanno Ee Siilaanyo Xilka Hayay W/Q Mohamed Abdi Hassan Diridhaba
Musuqii ugu xuma Somaliland wuxuu ka dhacay 7 dii sanno ee Siilaanyo xilka hayay, Tuuga tuug loo yaqaano ee Somaliland guryaha u dhaca naf ba u gaysay tuuganimada, laakiin tuuga jeebadahu u buuxaan ee xatooyaddu ka noqotay dhaqan iyo caado kaasi magaca tuuganimadu waa ka shaadh yaryahay waa in magac ka liita tuug loo raadiyo.
Xaqiiqdii waxaan aaminsanahay lacagta iyo hantida qoyska Siilaanyo dalka ka saareen ee ay ku bedesheen guryo iyo saamiyo dalka Emirateka laga furtay inaanay taariikhda musuq maasuqa ee Soomaalida hore usoo marin, xita ku dar cahdigii Maxamed Siyaad Barre dalka ka talinaayay.
Lacagaha iyo hantida ay ku qorteen shakhsiyaad ee ah hantidii danyarta laga xaday cadad iyo qiyaas ma laha.
Ilaahay waxaan ka baryay wakhti dhaw ayaan sallaad subax dhameeyay eh, inuu Allah meel xun bado kuwii hantida maatida, caruurta iyo ummadda tabaalaysan boobay, ilaahay adduunyadda iyo aakhiraba kuma liibaniyo, kuwa ubadkoodii u gartay inay xaaran ku quudiyaan waan huba in Allah maalin kale u kala gar qaadi, Ilaahay waxaan ka baryay inuu adduunyadda koonkeedana ku tuso abaalkooda.
Kuwa xoolo aanay habeen shaqaysan la siiyay ee xoolahii danyarta ubadkooda iyo ooridooda ku quudinaya Allah waxaan ka baryay inaanu u barakayn.
Awood ma lihi aan ku xisaabiyo, haddaan awood hayana allah igu oge waan ka soo celin lahaa, laakiin awoodaydu waa inaan Allah gacmaha u hoos dhigo.
Kuwa ummadda xoolaheeda boobay ha yaraato ama ha badate waynu u joogi doona siday adduunkan korkiisa ugu nooladaan
Waxaan idinka codsanaya inaad Aaminta badisaan in Allah ducada inaga aqbalo